Maraakiibta shisheeye ee illaalada ka haya badda oo bilaabay ugaarsiga duurjoogta Soomaaliya. – Radio Daljir
Maraakiibta shisheeye ee illaalada ka haya badda oo bilaabay ugaarsiga duurjoogta Soomaaliya.
Xaafuun, Sept 30 – Maraakiibta dagaalka ee illaalada ka haya biyaha caalamiga ah ayaa bilaabay in ay si sharci darro ah u gurtaan duurjooga Soomaaliya ee ku nool meelo badan oo ka mid ah dhulka miyiga ah ee ku dhow xeebaha.
Diyaarado ka soo haaday maraakiibta shisheeye ee ku sugan badda caalamiga ah gaar ahaan kuwa gaarka ka haya dhaq-dhaqaaqa iyo tallaabooyinka burcad-badeedda, ayaa bilaabay in ay si rasmi ah u gurub-sadaan ugaarta duur-jooga ah eek u dhaqan xeebaha Puntland sida Garanuugta iyo Deerada.
Dad badan oo ku sugan xeebaha iyo deegaannada miyiga ah ee ku teedsan xeebaha oo xiriir la soo sameeyey idaacadda Daljir, ayaa sheegay in ay arkeen diyaarado joog-hoose ku duulaya isla markaana si aan kala joogsi lahayn u guranaya ugaarta ku dhaqan dhulkaasi.
Degmada Xaafuun oo ka mid degmooyinka gobolka Kar-kaar ee dhaca dhinaca xeebta, ayaa ka mid ah meelaha lagu arkay diyaaraha jooga-hoose ku duulaya, waxaana dadka la soo xiriiray idaacadda Daljir qaar ka mid ahi xaqiijinayaan in ay idhahooda ku arkeen diyaaraha oo shabaq ku qabsanaya ugaarta noocyadeeda kala duwan.
Dadka xoolalayda ah ee deegaannadaasi ku nool, waxaa kale oo ay sheegeen gurashada ugaarta ka sokow, diyaaradahaasi in ay dhibaatooyin badan ku qabaan, kuwaasi oo ay ka mid tahay guux joogto ah oo u diiday har iyo hoyaatinta iyo xoolaha oo ka carara markii diyaaraduhu ku soo dhawaadaan.
Dhinaca kale deegaanno kale oo iyana ka mid ah gobolka Mudug gaar ahaan degmada Garacad, ayaa dhowr jeer oo hore qaylo-dhaan noocaan oo kala ahi ka timid, taas oo iyana ku saabsanayd diyaarado joog-hoose ku duulaya isla markaana guranaya ugaarta duur-joogta ah.
Maraakiibta ay diyaaradahaani ka soo kaceen ayaa ah kuwo ka socda wadamo badan oo adduunka ah, waxaana halkaasi loo geeyey in ay burcadda ka illaalinyaan gaadiidka badda ee wada shixnadaha kala gadisan, hase yeeshee haatan waxaa muuqata in ay ku dhaqaaqeen tallaabooyin ka baxsan waxyaabihii loo igmaday.
Xilligii ay asaasmayeen burcad-badeedda Soomaalidu, waxay ku curteen amaba dhaliyey in ay afduub ku sameeyaan gaadiidka badda waxay ahayd tallaabooyin sharci darro ah oo ka yimid qaar ka mid ah dalalka adduunka, kuwaasi oo si tuugaysi ah u jariifi jiray khayraadka badda Soomaaliya halka dalal kalena lagu tuhmayey in ay badda Soomaaliya ku shabaan haraadiga warshadaha Quwadda.
Waxaana arrintaasi ay dhalisay wax iska celin xilligii danbe isku badashay afduub sharci darro ah oo loo gaystay dhammaan gaadiidka badda oo ay ku jiraan kuwii ganacsiga kuwii wady gar-gaarka bini?aadantinimo, waxaana illaa iyo haatan qaar ka mid ah burcaddu ay ku andacoodaan in ay illaalsanayaan oo kaliya khayraadka baddooda, hase ahaatee waxaa cad in ay u tallaabeen biyaha caaliga ah iyagoon u meel-dayin gaadiidka badda isticmaala, taas oo walaac badan ku abuurtay dunidoo dhan.
Waxaa qaar badan oo ka mid ah aqoon-yahan iyo siyaasiyiinta Soomaaliyeed ay qabaan, tallaabooyinkaan cusub ee ku aaddan gurashada ugaartu ee ay wadaan diyaaraha ka soo kacaya Maraakiibta illaalada badda, in ay sii cimri dheeraynayso jiritaan burcad-badeedda, iyagoo hadba helaya qiil cusub oo ay falalkooda gurracan ee afduubka ku sii xoojiyaan.
Deegaannada laga soo sheegaya diyaaradaha guranaya ugaarta, ee ku yaalla xeebaha Puntland waa deegaanno ay mamnuuc ka tahay dilashada ugaarta, waxaana uu la kulmaa ganaax iyo ciqaab adag qofkasta oo lagu helo danbi ah in uu dilay ama dhaawacay xayawaanka duur-joogta ah.